3 ထိုင်ခုံထည်ဆိုဖာအိပ်ရာ, အမှတ်တံဆိပ်ယန္တရား Bed Frame နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်. ခိုင်ခံ့သောပတ်ပတ်လည်ပိုက်သတ္တုဘောင်, အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာနှင့်အတူ: 143*195*12စင်တီမီတာ. ဆိုဖာအိပ်ရာဖွင့်လှစ်သည့်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်.
အိမ်သုံးပရိဘောဂအထွေထွေအသုံးပြုခြင်း3ထိုင်ခုံထည်ဆိုဖာအိပ်ရာ, အမှတ်တံဆိပ်ယန္တရား Bed Frame နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်. ခိုင်ခံ့သောပတ်ပတ်လည်ပိုက်သတ္တုဘောင်, အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာနှင့်အတူ: 143*195*12စင်တီမီတာ. ဆိုဖာအိပ်ရာဖွင့်လှစ်သည့်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်.
ထုတ်ကုန်အမည်: ဆိုဖာအိပ်ယာ; အိပ်ယာဆိုဖာ; ဆိုဖာခေါက်ကုတင်; နှစ်ဆဆိုဖာအိပ်ရာ; ဆိုဖာအိပ်ရာခင်း
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 184L ကို * 102W * 92H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 189L ကို * 107W * 97H;